QM: K. Woqooyi Baahi Badan baa ka Jirta
Madaxa Gargaarka ee Qaramada Midoobay Mark Lowcock ayaa sheegay in uu arkay caddeyn muuqata oo ku saabsan baahida bani’aadaminimo ee ka jirta dalka Kuuriyada Woqooyi. Mr. Lowcock ayaa xaaladdan soo arkay mar uu booqasho ku tagey cisbitaalada, goobaha caruurta yaryar lagu xanaaneeyo, iyo beeraha ay iskaashatooyinku leeyihiin ee dalkaa K. Woqooyi.
Booqashada Mark Lowcock ayaa bilaabatay Isniintii toddobaadkan, waxana uu la kulmay saraakiil sarsare oo uu ku jiro Wasiirka Caafimaadka Jang Jun Sang.
Booqashadan Mr. Lowcock waa tii ugu horeysay ee sarkaal QM ka socdaa uu ku tago K. Woqooyi ilaa sanadkii 2011kii. Mr. Lowcock ayaa ujeedada booqashadiisa ku sheegay inuu doonayo inuu fahmo xaaladda bani’aadaminimo ee dalkaas ka jirta.
Isaga oo la haldaya Idaacadda VOA, qeybteeda Kuuriya la hadasha Arbacadii shalay ayuu sheegay in sidoo kale uu arkay madaxda hay’adda Cuntada Adduunka ee QM iyo hay’ado kale oo cuntada iyo beeraha qaabilsan.